Ukuthenga Isilinganiso Sebhizinisi Le-Optical Tape Ngevolumu Enkulu | I-KV Adheisve
Umholi wemboni yegumbi lobunjiniyela elihlanzekile kakhulu elihlanzekile uguqule ngempumelelo inkambu yefilimu esebenzayo ukuze aqale uhambo olusha lokukhula. Ibhizinisi lendabuko lenkampani i-R & D, ukukhiqizwa nokudayiswa kobunjiniyela belabhorethri ehlanzekile nemikhiqizo esekelayo. Iqede cishe amaphrojekthi ayi-100 wobunjiniyela bamagumbi ahlanzekile e-China. Ibhizinisi ngokuyinhloko lihlanganisa ukuklanywa nokwakhiwa kwegumbi elihlanzekile kakhulu, kanye ne-R & D, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwamagilavu ​​asekela uthuli namagilavu ​​aphikisana ne-static, izigqoko nezicathulo nezinye izinto ezisetshenziswayo. Izinga lokuhlanza okuhlanzekile lifinyelela ezingeni le-10. Kusukela ngo-2013, inkampani iye yashintsha isakhiwo sayo emkhakheni wezinto ezisebenzayo ezincane, ikakhulukazi ibeka ukukhiqizwa kwefilimu ye-TAC optical, ifilimu yepulasitiki ye-aluminium, i-OCA tape neminye imikhiqizo, iqala uhambo olusha lokukhula.
Hlanganisa ibhizinisi eliqondiwe lekhwalithi ephezulu lemboni yefilimu yepulasitiki ye-aluminium, futhi wendlale inkambu yesicelo sebhethri ye-lithium yamandla aphezulu. NgoJulayi 2016, inkampani yathola ibhizinisi le-aluminium-plastic composite ifilimu yangaphandle yokupakisha yebhethri ye-lithium-ion ngaphansi kwe-Japanese letterpress Co., Ltd. Ekupheleni kuka-2016, inkampani yakhelwe ukwandisa umthamo wokukhiqiza we-3 million square metres / ngenyanga e-Changzhou. Kulindeleke ukuthi kufakwe ekukhiqizeni engxenyeni yesithathu ka-2018. Ngemva kokukhiqizwa, inkampani izoba namandla okukhiqiza ifilimu ye-aluminium-plastic ye-5 million square metres / ngenyanga, futhi imikhiqizo yenkampani izoshintsha kancane kancane ekusetshenzisweni kwe-lithium. -ion ​​ibhethri ifilimu ye-aluminium-plastic Ibhizinisi le-membrane likhula libe namandla aphezulu e-lithium yebhethri ye-aluminium-plastic membrane field.
Ibhizinisi lezinto ezisebenzayo ze-elekthronikhi liye landiswa ngokushesha, futhi ukuguquguquka kokusebenza kwenkampani kuye kwandiswa ngenani elikhulu lemikhiqizo. Kusukela ekuguqulweni kwe-2013, inkampani itshale imali ekwakhiweni kwesisekelo sezimboni ze-elekthronikhi e-Changzhou. Imigqa engu-11 yokunemba yokunemba yephrojekthi yesigaba I yafakwa ekukhiqizweni ekupheleni kuka-2015, ikakhulukazi ukukhiqiza ifilimu yokuvikela ukuhlanzeka okuphezulu, ifilimu engaqhumi, itheyiphu enezinhlangothi ezimbili, itheyiphu ye-optical, igraphite yokukhipha ukushisa neminye imikhiqizo esebenzayo. Ngesikhathi esifanayo, inkampani yatshala ama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.12 ukuze kwakhiwe iphrojekthi yefilimu ye-TAC engu-94 million square metres, okulindeleke ukuthi ifakwe ekukhiqizweni maphakathi no-2018. Inkampani Impahla yokusebenza ye-Electronic kanye nemikhiqizo eminingi yandisa ukuguquguquka kokusebenza kwenkampani.
Kuhlongozwa ukuthola ukulingana okungu-100% kwe-Qianhong electronics ukuze kunwetshwe uchungechunge lwezimboni futhi kuthuthukiswe inzuzo ebanzi yokuncintisana yemboni. Inkampani ihlela ukukhipha amasheya ayizigidi ezingu-55.7, inyuse ama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.117, ikhokhe amayuan ayizigidi ezingu-338 ngesikhathi esifanayo, futhi ithole ukulingana okungu-100% kwe-Qianhong electronics. Ibhizinisi eliyinhloko le-Qianhong electronic lihlanganisa i-R & D, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwamadivayisi asebenza ngogesi abathengi. Ingumkhiqizi onquma ukufa phansi komfula wezinto ezisebenzayo zefilimu. Amakhasimende e-Qianhong electronics afaka phakathi abakhiqizi bomakhalekhukhwini bomugqa wokuqala abafana ne-oppo ne-vivo, kanye ne-Dongfang Liangcai ne-Changying enembile (10.470, – 0.43, -3.94%) nabanye abahlinzeki emkhakheni wezinto zikagesi zabathengi. I-Qianhong electronics ibe umphakeli oqeqeshiwe we-AAC kanye ne-Foxconn e-Langfang ngo-2017. I-Qianhong electronics ithembisa ukuthola inzuzo ephelele etholwa umzali kusukela ngo-2017 kuya ku-2019 hhayi ngaphansi kwama-yuan ayizigidi ezingu-110, ama-yuan ayizigidi ezingu-150 kanye namayuan ayizigidi ezingu-190 ngokulandelana. Ngemuva kokutholwa kwe-Qianhong electronics, inkampani yabona ukunwetshwa kochungechunge lwezimboni emkhakheni we-elekthronikhi yabathengi, futhi yathuthukisa inzuzo ephelele yokuncintisana yemboni.